Soo degso Boeing B-50 Superfortress V.1 FSX & P3D - Rikoooo
Moodhadh aad u fiican oo loogu talagalay diyaaradda dagaalka kadib ayaa waliba la jaan qaadi kara Prepar3d v4, xakamayn la xakameyn karo 3D Virteb Virt (ma jirin guddi 2D ah). Waxaa ku jira afar dhir udgoon iyo dhawaaqyo caadooyin ah.
Boeing B-50 Superfortress waa horumarinta weerarka Mareykanka ee B-29. Waxaa loo xilsaaray 1949 waxayna dhistay nuqulo 370 ah.
Akhri faylka Readme.txt macluumaad dheeri ah.